Volkswagen Jetta - kungcono imoto ethandwa kakhulu nokuthengisa of nje inkampani ethile yaseYurophu e-United States. yokuthengisa Lonyaka lokhu model ifinyelela amakhophi 110,000. Hhayi kudala Volkswagen Jetta ngo-2011 yaqala edayiswa e-Europe. Kulindeleke ukuthi kukhona lo mshini bayophindaphinda lwempumelelo osekuzuziwe e-United States.
Entsha Volkswagen Jetta ezemidlalo eside kuneyokuqala. Itholakala ukuhlukahluka ezintathu - Highline, Comfortline futhi wetrendi. Interior design Kunjengokulinda hhayi golfovsky. Manje Volkswagen Jetta, 2011, intengo zazo kuhluka $ 30 000, ithole isitayela sakhe. Isihlalo ezingemuva kuba mnandi futhi ivulekile (i legroom ikhuphukile 6.7 cm.), Futhi anda ubude base isondo imoto. Lezi zinguquko wavumela Volkswagen Jetta ukugcwalisa igebe phakathi Passat ezintsha kanye Golf ezihlangene.
Volkswagen Jetta nomqulu omncane izinjini. Naphezu kwakho konke lokhu, banayo kakhulu izici lobuchwepheshe. Njengoba isibonelo, nenjini, okulingana 1.6 amalitha, namandla -. 105 hp Kuyinto imvelo BlueMotion nguqulo ye diesel Turbo futhi sisebenzisa amalitha 4.2 kuphela. ngayinye amakhilomitha angamakhulu.
I Kungashiwo okufanayo mayelana 1,2 injini TSI, eyenziwe ubuchwepheshe obufanayo. umthamo Its 105 amahhashi, futhi izinga ukugeleza ngasinye eziyikhulu amakhilomitha kuyinto 5.3 amalitha. Singasho ukuthi lokhu impumelelo ezehlukile, njengoba Volkswagen Jetta, ifakwe le injini ungakwazi ukufinyelela isivinini-190 ngehora.
izinjini Iyatholakala futhi zaba namandla kakhulu: Turbo 140 amalitha. amabutho kanye ezintathu likaphethiloli nomthamo 122 hp, 147 hp futhi 200 l. amabutho. Ngakho, Volkswagen Jetta 2011 ifakwe kakhulu zobuchwepheshe, turbocharger nge umjovo oqondile. Zonke izinjini (ngaphandle TSI, ogama Amandla 105 amahhashi) ezifakiwe nge-gearbox okuzenzakalelayo nge amvikele ezimbili.
Three ephelele Volkswagen Jetta
1. Volkswagen Jetta 2011 wetrendi - yisona version eyisisekelo salolu chungechunge. Uhlu ejwayelekile kwezintambo kuhlanganisa ama-airbag ayisithupha (ungakwazi ukuthenga kuze kube eyisishiyagalombili), ezinhlanu ekhethekile ikhanda Imingcele, kanye inkomba sekhiba ukuphepha, uhlelo anti-lock, umsebenzi auto amandla alamu ngesikhathi unyathela amabhuleki esindayo, uhlelo kuyasiza udlulele eyehlelayo, futhi isistimu sihlale sizinzile.
2. Volkswagen Jetta Comfortline uyisibonelo maphakathi no-range ochungechungeni. Kufaka izakhi ezifana emaphaketheni encane emihlane izihlalo eziphambili, amacansi phansi yendwangu, isikhungo yokubeka,-chrome sekugcineni futhi "lesikhumba iphasela elincane" (isibambo gearshift, amasondo ayo, ibhuleki lesandla isigwedlo, lesikhumba-camera), ufaka abamnyama.
3. Volkswagen Jetta Highline - kuba imishini ocebile lokhu model. It kungenziwa wayala Izinjini 122 hp kanye nanoma yimuphi diesels. Le modeli is kwahambisana by ngama-chrome emhlabeni Izinsimbi futhi ohlangothini amafasitela foglights ukuziqonda ukuvula ukukhanya umsebenzi. Kukhona iphakethe ebusika: ukufuthelana izihlalo eziphambili kanye somoya Washer.
Volkswagen Jetta: libuyekeza abashayeli
Buhle: Ideal for umndeni, ukumiswa ezinhle, elingaphakathi ivulekile, ezinkulu umthwalo gumbi, ukugcinwa lula, ukuphepha, ukwethembeka, ukusebenza kahle, Dynamics ezinhle, okusezingeni eliphezulu phansi imvume.
Nebubi: hhayi kangako kukhulu Ukubuyekeza esimenza abone into engemuva esibukweni eside kakhulu isinyathelo bamba, ube usufaka iarmrest smallish.
Citroen DS4: ezibekiweko lobuchwepheshe, izincazelo kanye nokubuyekeza
Lapho uPetru 1 Army kwamiswa ngesisekelo izinsizwa. Umlando Russian isimo ibutho
Iphoyisa elivuthiwe - liyini? Iphoyisa elivuthiwe elenziwe nge-porcelain stoneware
Indawo egcina amagugu esizwe Ivanovo Calico: ikheli, amahora, umlando
Yamamolekhula izinwele nokubuyiselwa: incazelo inqubo, ukusebenza kahle, kanye nokubuyekeza
Egg imiqulu ofakwe
Appetizer isitshalo seqanda zokupheka
CP-3 "Okusheshayo": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nezithombe